Ishibhile 6016 aluminium alloy heat treatment CNC CNC machining parts ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
Ukwelashwa kwe-6016 aluminium alloy heat CNC
Ukwelashwa kokushisa kwe-aluminium alloy castings ukukhetha ukucaciswa okuthile kokushisa, ukulawula izinga lokushisa ukukhuphukela ekushiseni okuthile isikhathi esithile futhi kuphole ngejubane elithile ukushintsha ukwakheka kwe-alloy.
Ukwelashwa kokushisa kwe-aluminium kwe-6016
Isisekelo sokwelashwa kokushisa kwe-aluminium alloy
Inhloso enkulu ukuthuthukisa izakhiwo zemishini ye-alloy futhi kuthuthukise ukumelana. Ukugqwala ukusebenza, ngcono ukusebenza ukucutshungulwa, futhi uthole ukuzinza ntathu.
Uhlobo ngezigaba aluminium ingxubevange ukucutshungulwa efanelekayo ukwelashwa ukushisa:
Ama-aluminium alloys angalungiswa ukuze abe namandla, ukwakheka, nezinye izakhiwo ngokusebenza okubandayo, ukucima, ukuguga, nezindlela zokuncoma. Ngokwenqubo enjalo yokusebenza ukuthola izakhiwo ezidingekayo, lo msebenzi ubizwa ngokuthi ukwelashwa ngokushisa, futhi ukwahlukaniswa kwe-tempering kubizwa ngokuthi uhlobo lokushisa. Ngokuvamile, izinto ezilahlekile ze-aluminium zihlukaniswe ngezigaba ezimbili: uhlobo lokwelashwa okungelona ukushisa nohlobo lokwelashwa kokushisa: i-aluminium emsulwa (uchungechunge lwe-1000), i-Al-Mn series alloy (3000 uchungechunge), i-Al-Si series alloy (4000 series) kanye Ama-alloys e-Al-Mg Series (5000 chungechunge) angama-alloys angewona ashisayo; Ama-alloys ochungechunge lwe-Al-Cu-Mg (2000 series), ama-alloys ochungechunge lwe-Al-Mg-Si (6000 series) nama-alloys ochungechunge lwe-Al-Z n-Mg (7000 series) angamalungu we-Heat-treated alloy.
Ouzhan ngezifiso aluminium ingxubevange machining izingxenye umkhiqizo ukubonisa
Uyini umphumela wokwelashwa kokushisa kwe-aluminium alloy?
I-6063 aluminium alloy ine-thermoplasticity enhle, ukumelana nokugqwala okuhle kanye nezindawo ezinhle zomshini, futhi kulula ukuyifakela i-electroplated, ngakho-ke isetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni amaphrofayli ezimboni, amaphrofayli ezakhiwo nezinto zeradiator kagesi. Ngokuya ngemvelo yokufaka isicelo, kunomehluko omkhulu kuzidingo zokusebenza komkhiqizo. Isibonelo, imikhiqizo yokusebenza ephezulu esetshenziswa kuma-elekthronikhi esiteshini sokupholisa esiteshini sinezidingo eziphakeme zokumelana nokugqwala kwendawo kwezinto, namaphrofayli wezakhiwo asetshenziswe kuzakhiwo zodonga oluphakeme kakhulu. Izidingo zepulasitiki namandla ziqinile, kwenza kubaluleke kakhulu ukuthuthukisa ukusebenza okuphezulu kwe-aluminium alloy materials. Enqubeni yocwaningo nentuthuko yama-alloys anjalo e-aluminium, izinqubo zokwelapha ukushisa zisetshenziswa ezindaweni eziningi ukuthola isakhiwo nezakhiwo ezingcono.
Langaphambilini Izingxenye zephrofayili ye-Aluminium extrusion
Olandelayo: Izingxenye ze-Aluminium alloy radiator ezikhishiwe